Maitiro Ekuisa An iPhone Mune DFU Mode, Iyo Apple Way - Iphone
kurota nezve kuve nepamuviri nemapatya zvinoreva
maitiro ekuvhura iphone neitunes
ipad haigare yakabatana neinternet
DFU inomirira Mudziyo Firmware Kwidziridzo , uye ndiyo yakadzama mhando yekudzoreredza iwe yaunogona kuita pane iyo iPhone. An Apple anotungamira genius akandidzidzisa maitiro ekuisa iPhones muDFU modhi, uye seApple tech, ndakazviita mazana enguva.
Zvinoshamisa kuti, handisati ndamboona imwe chinyorwa ichitsanangura maitiro ekupinda DFU modhi nenzira yandakadzidziswa. Ruzivo rwakawanda kunze uko rwuripo zvisiri pachena . Muchikamu chino, ini ndichatsanangura chii chinonzi DFU modhi , sei firmware inoshanda pane yako iPhone , uye kukuratidza nhanho-nhanho sei DFU kudzorera iPhone wako.
Kana iwe uchida kutarisa pane kuverenga (chaizvo, zvese zvinogona kubatsira), svetukira pasi kune yedu nyowani YouTube vhidhiyo nezve DFU modhi uye maitiro eDFU kudzorera iyo iPhone .
Izvo Zvaunoda Kuti Uzive Tisati Tatanga
Iyo Bhatani repamba ndiyo bhatani rakatenderera pazasi pekuratidzwa kwe iPhone yako.
Iyo Kurara / Wake Bhatani izita raApple rebhatani remagetsi.
Iwe unozoda a timer kuverenga kusvika kumasekondi masere (kana iwe unogona kuzviita mumusoro wako).
Kana uchikwanisa, tsigira yako iPhone ku iCloud , iTunes , kana Tsvaga usati waisa yako iPhone muDFU modhi.
NEW: Macs anomhanya macOS Catalina 10.15 kana nyowani yekushandisa Tsvaga kuDFU kudzorera iPhones.
Maitiro Ekuisa An iPhone Mune DFU Mode
Chivhariso iPhone wako kombiyuta yako uye kuvhura iTunes kana uine Mac inomhanya macOS Mojave 10.14 kana PC . Vhura Tsvaga kana uine Mac inomhanya macOS Catalina 10.15 kana nyowani . Izvo hazvina basa kana yako iPhone iri kuvhura kana kudzima.
Dhinda uye ubate Kurara / Wake Bhatani uye Bhatani repamba (iPhone 6s uye pazasi) kana vhoriyamu pasi bhatani (iPhone 7) pamwechete masekondi masere.
Mushure memasekonzi masere, sunungura Kurara / Wake Bhatani asi ramba wakabata Bhatani repamba (iPhone 6s uye pazasi) kana vhoriyamu pasi bhatani (iPhone 7) kusvikira yako iPhone yaonekwa muTunes kana Tsvaga.
Rega kuenda kuImba Bhatani kana vhoriyamu pasi bhatani. Chiratidziro chako che iPhone chichava chakasviba zvachose kana iwe wabudirira kupinda muDFU modhi. Kana zvisiri, edza zvakare kubva pakutanga.
Maitiro Ekuisa An iPhone 8, 8 Plus, Kana X Mune DFU Mode
Mamwe akawanda mawebhusaiti anopa enhema, anotsausa, kana akaomesesa matanho kana achikuudza maitiro ekuita DFU kudzoreredza yako iPhone 8, 8 Plus, kana X. Ivo vachakuudza iwe kudzima yako iPhone kutanga, izvo zvisina basa zvachose. Yako iPhone haifanire kuti ibviswe usati waiisa muDFU Mode .
Kana iwe uchida mavhidhiyo edu, tarisa yedu nyowani YouTube vhidhiyo nezve sei DFU kudzorera yako iPhone X, 8, kana 8 Plus . Kana iwe uchida kuverenga nhanho, maitiro acho ari nyore nyore kupfuura zvavanoita kuti zvive! Maitiro acho anotanga senge rakaoma reset.
KuDFU kudzoreredza yako iPhone X, 8, kana 8 Plus, kurumidza kudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu kumusoro bhatani, uye nekukurumidza pusha uye buritsa vhoriyamu pasi bhatani, uye pfuurira uye bata bato rerutivi kusvikira iyo skrini yaenda nhema.
Kana iko iko iko skrini kungoita nhema, tinya uye ubatise vhoriyamu pasi bhatani uchiramba wakabata bato rerutivi.
Mushure memasekonzi mashanu, sunungura bhatani repadivi asi ramba wakabata vhoriyamu pasi bhatani kusvikira yako iPhone iratidzike muTunes kana Finder.
Kana ichingoonekwa muTunes kana Tsvaga, buritsa vhoriyamu bhatani. Ta-da! Yako iPhone iri muDFU modhi.
Ongorora: Kana iyo Apple logo iri kuoneka pachiratidziri, iwe wakabatisa pasi vhoriyamu pasi bhatani kwenguva refu. Tanga maitiro kubva pakutanga uye edza zvakare.
Maitiro Ekuisa An iPhone XS, XS Max, Kana XR Mune DFU Mode
Matanho ekuisa iyo iPhone XS, XS Max, XR muDFU modhi yakafanana chaizvo nematanho eiyo iPhone 8, 8 Plus, uye X. Tarisa uone yedu YouTube vhidhiyo nezve kuisa iPhone XS, XS Max, kana XR muDFU modhi kana iwe uri wekudzidzira kuona! Isu tinoshandisa yangu iPhone XS kukufamba nematanho ese eichi chiitiko.
Maitiro Ekuisa An iPhone 11, 11 Pro, Kana 11 Pro Max Mune DFU Mode
Unogona kuisa iPhone 11, 11 Pro, uye 11 Pro Max muDFU modhi nekutevera matanho akafanana sezvaungaita kune iPhone 8 kana nyowani. Buda vhidhiyo yedu yeYouTube kana iwe uchida rubatsiro kushanda kuburikidza nemaitiro acho.
Kana Iwe Unogona Kutarira Pane Kuverenga…
Tarisa uone yedu nyowani YouTube dzidziso nezve maitiro ekuisa iyo iPhone muDFU modhi uye maitiro ekuita iyo DFU kudzoreredza kana iwe uchida kuchiona ichiita.
Kana iwe DFU kudzorera iPhone wako, kombiyuta yako erases uye reloads ose chidimbu bumbiro kuti anodzora software uye Hardware pane yako iPhone. Pane mukana wekuti chimwe chinhu chikanganise.
Kana yako iPhone yakanganisika chero nzira, uye kunyanya kana yakakuvara nemvura, iyo DFU kudzoreredza inogona kutyora yako iPhone. Ini ndashanda nevatengi vakaedza kudzorera maPhones avo kugadzirisa dambudziko diki, asi mvura yakanga yakanganisa chimwe chikamu chakatadzisa kudzoreredza kupedzisa. Iyo iPhone inoshandiswa ine matambudziko madiki inogona kushomeka zvachose kana DFU kudzorera ikatadza nekuda kwekukuvara kwemvura.
Chii chinonzi Firmware? Chii Chinoita?
Firmware ndiyo chirongwa chinodzora Hardware yeyako kifaa. Software inoshanduka nguva dzese (iwe unoisa maapplication uye kurodha pasi email nyowani), Hardware haichinje (ndinovimba, hauvhure yako iPhone uye woironga zvekare zvikamu zvayo), uye firmware zvinenge zvisingambochinja - kunze kwekunge zvadaro has ku.
Ndeapi Mamwe Magetsi Midziyo Ane Firmware?
Vose zvavo! Funga nezvazvo: Wako muchina wekuwachisa, wekuomesa, weTV kure, uye microwave ese anoshandisa firmware kudzora mabhatani, nguva, uye zvimwe zvakakosha mabasa. Iwe haugone kuchinja zvinoitwa nePopcorn pane yako microwave, saka haisi software - ndiyo firmware.
DFU Inodzosera: Zuva rese, Zuva rega rega.
Vashandi veApple vanodzoreredza yakawanda iPhones. Kupiwa sarudzo, ndingadai nguva dzose sarudza iyo DFU kudzoreredza pane yakajairwa kana yekudzosa maitiro kudzoreredza. Iyi haisi yepamutemo Apple mutemo uye mamwe ma tech angati zvinopfuura, asi kana iPhone iine dambudziko iro unokwanisa kugadziriswa nekudzoreredza, iyo DFU kudzoreredza inomira mukana wakanyanya wekugadzirisa.
Ndatenda nekuverenga uye ndinotarisira kuti chinyorwa chino chinojekesa zvimwe zvisiri izvo painternet nezve maitiro ekupinza DFU modhi uye nei uchida kuishandisa. Ndinokukurudzira kuti ubvume kugadzirira kwako mukati. Unofanira kudada! Zvino unogona kuudza shamwari dzako (uye vana), 'Hongu, ndinoziva DFU kudzorera iPhone yangu.'